Mpanamboatra fampifangaroana mpamatsy, mpamatsy - China Splicing Fitting Factory
Bimetal clamp parallel groove clamp manokana sy insulation (1KV, 10KV, 20KV)
● Fampiharana JB, JBL, JBT, JBTL andiana fantsona fantsona mirazotra miavaka dia mety amin'ny fifandraisana tsy misy fiakarana sy ny sampan'ny mpitantana amin'ny tsipika ambony. Izy io dia ampiasaina ho toy ny insulated fiarovana miaraka amin'ny insulate cover. ● Fitaovana firafitra 1. Safidio ny firaka aliminioma fanoherana oksidasiana 2. Ny singa dia atambatra nefa tsy milatsaka mandritra ny fametrahana 3. Ny arofanina boribory dia voatana mafy amin'ny faritra midadasika, ary ny mpitantana dia tsy mora misisika ● Famonoana fonosana insulation .. .
Fitaovana tariby misy vodin-doha
1. Topimaso momba ny vokatra Anaran'ny vokatra ： Terminal Torque （Series BLMT method Fomba fanehoana maodely BLMT- □ mifan / □ nivady - □ amin'ny fitaovana, ampiasaina indrindra amin'ny fampifandraisana tariby mitaingina, tariby aliminioma, tariby alimika alimo, tariby vita amin'ny vy ary vy tariby amin'ny toerana tsy misy. 3. Sehatry ny fampiharana Andalana mitarika azo ampiharina ： 25-240㎜². 4.Technical param ...